(trg)="2"> ३ तिनीहरूले राजीखुसीले आफैलाई अर्पण गरे — ओसेनिया
(trg)="3"> ७ “ तिमीहरूको भ्रातृप्रेम कायम रहोस्‌ ”
(trg)="4"> सन्‌ २०१६ को वार्षिक पद कुन हो ?
(trg)="5"> यो पद देख्दा हामीले वर्षभरि कुन - कुन कुरा मनमा राख्नुपर्छ ?
(trg)="6"> यस वर्षको वार्षिक पदबाट कसरी पूरापूर लाभ उठाउन सक्छौं , त्यस विषयमा हामी यस लेखमा छलफल गर्नेछौं ।
(trg)="7"> १२ “ अवर्णनीय वरदान ” - प्रति कृतज्ञ हुनुहोस्‌
(trg)="8"> यहोवाले हामीलाई “ अवर्णनीय वरदान ” दिनुभएको छ भनेर प्रेषित पावलले बताए ।
(trg)="9"> त्यो वरदान के हो ?
(trg)="10"> त्यसले हामीलाई येशू ख्रीष्टको पदचिन्ह पछ्याउन , दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रेम गर्न र अरूलाई मनैदेखि क्षमा गर्न कसरी उत्प्रेरित गर्छ ?
(trg)="11"> यी प्रश्‍नहरूबारे र स्मरणार्थको समयमा चाल्न सकिने केही व्यावहारिक कदमबारे हामी यस लेखमा छलफल गर्नेछौं ।
(trg)="12"> १७ “ पवित्र शक्‍ति आफैले हाम्रो मनलाई बोध गराउँछ ”
(trg)="13"> २२ “ हामी तपाईंसितै जानेछौं ”
(trg)="14"> आफूलाई स्वर्गीय बोलावट भएको छ कि छैन भनेर कुनै व्यक्‍तिले कसरी थाह पाउँछन्‌ अनि तिनको लागि अभिषिक्‍त जन हुनुको अर्थ के हो , त्यस विषयमा हामी यी दुई लेखमा छलफल गर्नेछौं ।
(trg)="15"> साथै अभिषिक्‍त जनहरूले आफूलाई कस्तो ठान्‍नुपर्छ अनि प्रतीक खानेहरूको सङ्‌ख्या बढ्‌दा हामीले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनुपर्छ , त्यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौं ।
(trg)="16"> २८ परमेश्‍वरसँगै काम गर्दा हामी आनन्दित हुन सक्छौं
(trg)="17"> सृष्टिको सुरुदेखि नै आफ्नो उद्देश्‍य पूरा गर्न यहोवाले अरूलाई पनि आफ्नो काममा सहभागी हुने निम्तो दिंदै आउनुभएको छ ।
(trg)="18"> संसारभरका मानिसहरूले साक्षी पाऊन्‌ भन्‍ने उहाँ चाहनुहुन्छ अनि यो काममा भाग लिन उहाँले हामीलाई पनि निम्तो दिनुभएको छ ।
(trg)="19"> परमेश्‍वरको सहकर्मी हुँदा हामीले के - कस्ता आशिष्‌ पाउँछौं , त्यस विषयमा हामी यस लेखमा छलफल गर्नेछौं ।
(trg)="20"> आवरण तस्बिर :
(trg)="21"> मडागास्करको मोरोनडाभा भन्‍ने ठाउँमा पाइने बाओबाब रूखहरूको बीचमा उभिएर गाडा चलाउने मानिसलाई बाइबल सन्देश सुनाउँदै गरेका अग्रगामी भाइ
(trg)="23"> बाइबल अध्ययन
(trg)="24"> स्मरणार्थ उपस्थिति
(trg)="1"> बर्नेट , सिमोन , इस्टन र केलब
(trg)="2"> लगभग ३५ वर्षकी रेना अस्ट्रेलियामा हुर्केकी थिइन्‌ ।
(trg)="3"> तिनको परिवार प्रचार गर्न निकै जोसिलो थियो ।
(trg)="4"> अहिले तिनी यसो भन्छिन्‌ : “ हामी प्रचारकहरूको आवश्‍यकता भएको विभिन्‍न ठाउँमा सेवा गर्न गयौं ।
(trg)="5"> आमाबुबाले हामीलाई निकै रमाइलो वातावरणमा हुर्काउनुभएको थियो ।
(trg)="6"> म पनि दुई छोराछोरीलाई त्यस्तै वातावरणमा हुर्काउने प्रयास गर्दै छु । ”
(trg)="7"> रेनाका श्रीमान्‌ शान पनि आवश्‍यकता धेरै भएको ठाउँमा गएर सेवा गर्न चाहन्थे ।
(trg)="8"> चालीस वर्ष पुग्नै लागेका शान यसो भन्छन्‌ : “ हाम्रो दोस्रो सन्तान जन्मेपछिको कुरा हो , हामीले प्रहरीधरहरा - मा एउटा लेख पढ्यौं ।
(trg)="9"> त्यस लेखमा एउटा परिवार आवश्‍यकता धेरै भएको ठाउँमा गएर सेवा गरेको अनुभव थियो ।
(trg)="10"> उनीहरू आफ्नै डुङ्‌गा लिएर प्रशान्त महासागरको दक्षिण - पश्‍चिममा पर्ने टोंगा भन्‍ने टापुमा सेवा गर्न गएका रहेछन्‌ ।
(trg)="12"> त्यसैले अस्ट्रेलिया र न्यु जील्याण्डको शाखा कार्यालयलाई कुन - कुन ठाउँमा प्रचारकको आवश्‍यकता छ भनेर सोध्यौं ।
(trg)="14"> जेकब , रेना , इस्की र शान
(src)="12"> Шен , Рене , иара убас рхәыҷқәа Џьеикоби Скаии шықәсык аҟара Тонга инхон .
(trg)="16"> तर त्यहाँ घरी - घरी हूलदङ्‌गा र बन्द - हडताल भइरहने भएकोले तिनीहरू अस्ट्रेलिया फर्कनुपऱ्‍यो ।
(trg)="17"> त्यहाँबाट फर्के पनि प्रचारकार्यमा अझै जोडतोडले लाग्ने तिनीहरूको इच्छा मरेको थिएन ।
(trg)="18"> त्यसैले सन्‌ २०११ मा तिनीहरू प्रशान्त महासागरको नोरफोक टापु - मा सरे ।
(trg)="19"> त्यो सानो टापु अस्ट्रेलियाबाट लगभग १,५०० किलोमिटर पूर्वतिर पर्छ ।
(trg)="20"> त्यो टापुमा सर्दा कस्तो फाइदा भयो ?
(trg)="21"> अहिले १४ वर्षका जेकब यसो भन्छन्‌ : “ यहोवाले सधैं हाम्रो हेरविचार गर्नुभएको छ ।
(trg)="22"> त्यतिमात्र होइन , उहाँले गर्दा नै हामीले प्रचारबाट धेरै आनन्द उठाइरहेका छौं । ”
(trg)="24"> तिनीहरू त्यसरी सर्नुको कारण के हो ?
(trg)="26"> हामी उनीहरूलाई नियमित रूपमा बाइबल अध्ययन गराउन चाहन्थ्यौं । ” — बर्नेट
(trg)="27"> लगभग ३५ वर्षका बर्नेट र सिमोन - को इस्टन र केलब नाम गरेका १२ र ९ वर्षका छोरा छन्‌ ।
(trg)="28"> तिनीहरू पनि बर्कटाउन भन्‍ने ठाउँमा सरेका थिए ।
(trg)="29"> त्यो अस्ट्रेलिया - को क्वीन्सल्यान्ड - मा पर्ने एउटा दुर्गम ठाउँ हो ।
(trg)="30"> बर्नेट यसो भन्छन्‌ : “ त्यहाँ ३ - ४ वर्षमा एकपटक मात्र प्रचार गरिन्थ्यो ।
(trg)="33"> जिम , ज्याक , मार्क र कारन
(trg)="34"> मार्क र कारन - को उमेर ५० नाघिसकेको छ ।
(trg)="36"> त्यहाँ खानीमा काम गर्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन्‌ ।
(trg)="37"> त्यहाँ जानुअघि मार्क र कारनले अस्ट्रेलियाको सिड्‌नी नजिकैका केही मण्डलीमा सेवा गरिसकेका थिए ।
(trg)="38"> मार्क यसो भन्छन्‌ : “ म मानिसहरूलाई माया गर्छु ।
(trg)="39"> त्यसैले आवश्‍यकता धेरै भएको मण्डली वा इलाकामा गएर सेवा गर्न चाहन्थें । ”
(trg)="40"> तर कारन भने नयाँ ठाउँमा सर्न हिचकिचाइरहेकी थिइन्‌ ।
(trg)="41"> तिनी भन्छिन्‌ : “ मलाई मार्क र अरू साथीभाइले प्रोत्साहन दिनुभयो ।
(trg)="42"> त्यसैले एक पटक गइहेर्छु भन्‍ने लाग्यो ।
(trg)="44"> बेन्जामिन , जेडी , ब्रीया र कार्लिन
(trg)="45"> सन्‌ २०११ मा बेन्जामिन र कार्लिन अस्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्डबाट टिमोर - लेस्टे भन्‍ने ठाउँमा सरे ।
(trg)="46"> यो ठाउँ इन्डोनिसियाको टिमोर टापुमा पर्छ ।
(trg)="47"> बेन्जामिन र कार्लिनले स्कुल जाने उमेर हुनै लागेका छोरी जेडी र ब्रीया - लाई पनि साथमै लगे ।
(trg)="48"> बेन्जामिन भन्छन्‌ : “ कार्लिन र मैले यो ठाउँमा विशेष अग्रगामीको रूपमा सेवा गरिसकेका थियौं ।
(trg)="49"> यहाँ प्रचार गर्दा निकै रमाइलो हुन्थ्यो ।
(trg)="51"> यस्तो ठाउँ छोड्‌नुपर्दा हाम्रो मन साह्रै रोएको थियो ।
(trg)="52"> हामी फेरि यो ठाउँमा फर्कन चाहन्थ्यौं ।
(trg)="54"> कार्लिन यसो भन्छिन्‌ : “ हामी आफ्ना छोरीहरू मिसनरी , बेथेल सेवक र विशेष अग्रगामीहरूसित घुलमिल भएको र तिनीहरूबाट आध्यात्मिक मदत पाएको चाहन्थ्यौं । ”
(trg)="55"> येशूले चेलाहरूलाई यसो भन्‍नुभयो : “ तिमीहरूमध्ये को यस्तो होला , जसले धरहरा बनाउने विचार गरेपछि , त्यो बनाइसिद्धयाउने खर्च आफूसित छ कि छैन भनी बसेर पहिला हिसाब गर्दैन ? ”
(trg)="56"> कसैले परिवारै मिलेर अर्को ठाउँमा सेवा गर्न जाने विचार गर्दै छन्‌ भने पनि यो सिद्धान्त लागू गरेर पहिल्यै योजना बनाउनु जरुरी छ ।
(trg)="57"> यसरी योजना बनाउँदा के - कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
(trg)="58"> आध्यात्मिक तयारी : बेन्जामिन यसो भन्छन्‌ : “ हामी अरूको सेवा गर्न चाहन्छौं तर तिनीहरूको लागि बोझ बन्‍न चाहँदैनौं ।
(trg)="59"> त्यसैले नयाँ ठाउँमा सर्नुअघि हामीले यहोवासितको आफ्नो सम्बन्ध अझ बलियो बनायौं ।
(trg)="60"> मण्डलीमा विभिन्‍न जिम्मेवारी सम्हाल्ने र प्रचारमा धेरैभन्दा धेरै भाग लिने बानी बसाल्यौं । ”
(trg)="61"> माथि उल्लेख गरिएका जेकब यसो भन्छन्‌ : “ नोरफोक टापुमा आउनुअघि आवश्‍यकता धेरै भएको ठाउँमा सेवा गरेका परिवारहरूको अनुभव प्रहरीधरहरा र ब्यूँझनुहोस्‌ ! - मा खोजी - खोजी पढ्यौं ।
(trg)="62"> तिनीहरूले के - कस्ता चुनौती र समस्या सामना गर्नुपऱ्‍यो अनि यहोवाले कसरी तिनीहरूलाई मदत गर्नुभयो भन्‍ने विषयमा परिवारमा छलफल गऱ्‍यौं । ”
(trg)="63"> जेकबकी ११ वर्षीया बहिनी इस्की भन्छिन्‌ : “ मैले एक्लै र आमाबुबासित बसेर यहोवा परमेश्‍वरलाई धेरैचोटि प्रार्थना गरें । ”
(trg)="64"> भावनात्मक तयारी : रेना भन्छिन्‌ : “ म पहिला बसेको ठाउँमा मेरा सबै नातागोता , इष्टमित्रहरू थिए ।
(trg)="65"> त्यसैले मलाई निकै रमाइलो लाग्थ्यो ।
(trg)="66"> तर अहिले म आफूले छाडेर आएको कुरा सोचेर बस्दिनँ ।
(trg)="67"> बरु परिवारै सरेर यहोवाको सेवा गर्दा कस्तो आनन्द उठाउन सकें , त्यसमा मन लगाउँछु । ”
(trg)="68"> संस्कृतिमा घुलमिल हुने तयारी : धेरैजसो परिवारले आफू नयाँ ठाउँमा जानुअघि नै त्यस ठाउँबारे राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्छन्‌ ।
(trg)="69"> मार्क यसो भन्छन्‌ : “ हामीले नालनबोईको बारेमा भेटेजति जानकारी पढ्यौं ।
(trg)="70"> त्यहाँका दाजुभाइहरूले पनि स्थानीय पत्रपत्रिकाहरू पठाउनुभयो ।
(trg)="71"> त्यसको माध्यमबाट हामीले त्यस सहरमा बस्ने मानिसहरूको संस्कृति , रहनसहनबारे धेरै कुरा बुझ्न सक्यौं । ”
(trg)="72"> नोरफोक टापुमा सरेका शान यसो भन्छन्‌ : “ मैले राम्रा गुणहरू खेती गर्न निकै मेहनत गरें ।
(trg)="73"> किनभने मलाई थाह छ , यदि म इमानदार , नम्र , सफा मनको र मेहनती भएँ भने संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि सजिलै घुलमिल हुन सक्छु । ”
(trg)="74"> सफल हुन चाहन्छौं भने आफूले कहिल्यै आस नगरेको अवस्था आउँदा समेत हामी सकारात्मक हुनुपर्छ र त्यसको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।
(trg)="75"> यसका केही उदाहरण विचार गरौं :
(trg)="76"> रेना भन्छिन्‌ : “ मैले फरक ढङ्‌गमा कामकुरो सम्हाल्न सिकें ।
(trg)="77"> जस्तै : नोरफोक टापुमा समुद्री मौसम खराब हुँदा खानेकुरा बोकेको जहाज आउँदैनथ्यो अनि यसले गर्दा खानेकुराको अभाव हुन्थ्यो र महँगी बढ्‌थ्यो ।
(trg)="78"> त्यसैले आफूसित जे छ , त्यही पकाउन र फारो गरेर छाक टार्न सिकें । ”
(trg)="79"> तिनका श्रीमान्‌ शान पनि यसो भन्छन्‌ : “ हामी हप्ताभरिको लागि बजेट छुट्ट्याउथ्यौं र त्यहीअनुसार खर्च गर्थ्यौं । ”
(trg)="80"> तिनीहरूका छोरा जेकबले चाहिं अर्कै प्रकारको चुनौतीको सामना गर्नुपऱ्‍यो ।
(trg)="81"> तिनले यसो भने : “ हाम्रो नयाँ मण्डलीमा हामीबाहेक अरू सात जना मात्र हुनुहुन्थ्यो ।
(trg)="82"> त्यो पनि सबै पाको उमेरका ।
(trg)="83"> मेरो उमेरका कोही थिएनन्‌ ।